E-News Nepali || Fast and Accuracy » अब दलालीमार्फत घरजग्गा किनबेच गर्न सरकारले लगायो प्रतिबन्ध, यदि किन्नु भयो भने हुने छ तपाईलाइ ठुलो समस्या
अब दलालीमार्फत घरजग्गा किनबेच गर्न सरकारले लगायो प्रतिबन्ध, यदि किन्नु भयो भने हुने छ तपाईलाइ ठुलो समस्या
घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी ‘मोडल’मा सञ्चालन र गैरकरको प्रभावकारिताबारे अध्ययन भइरहेको छ । खासगरी, रियल इस्टेट कारोबार करको दायराबाहिर छ । घरघरमा व्यक्तिगत संस्था खोलेर अवैधानिक रूपमा कारोबार गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे अध्ययन थालिसकेको छ । घरजग्गा कारोबार विश्वभर अभ्यासअनुसार एजेन्सीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ । यही मान्यतामा अध्ययन अघि बढाइएको छ ।
करको दायरा विस्तार गर्न सरकारले लामो समयको छलफलपछि गठन गरेको राजस्व परामर्श विकास समितिले करयोग्य नयाँ क्षेत्र पहिचानका लागि अध्ययनसमेत सुरु गरेको छ ।
यसअघि, प्रदेशस्तरीयमा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम विषयमा देशका विभिन्न स्थानमा छलफल गरेको समितिले अहिले करयोग्य नयाँ क्षेत्र पहिचानका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो । अझै राजस्व दायरामा नआएका विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी विश्लेषणपछि सरकारलाई करसम्बन्धी नीतिनियम निर्माण गर्न सल्लाह दिने समितिले जनाएको छ ।
विज्ञ टोलीले पनि कर दायरा विस्तार सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ । टोलीको प्रतिवेदन विश्लेषण गरेर आगामी बजेटका लागि वैशाख अन्तिम साता सरकारलाई कर नीति विषयमा ‘फुल प्याकेज’मा सल्लाह दिने समिति तयारी छ ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिले करयोग्य क्षेत्र पहिचान गर्दै सरकारलाई आगामी राजस्व नीतिका लागि सुझाव पेस गर्न अध्ययन अघि बढाएको छ । राजस्व दायराभित्र नआइसकेका करयोग्य क्षेत्र पहिचानका लागि विभिन्न समिति तथा विज्ञमार्फत अध्ययन अघि बढाइएको हो ।
पछिल्लो समय आएको अनलाइन व्यापार, घरजग्गा व्यवसाय, कन्सल्टेन्सी, ढुवानी व्यवसाय, अनलाइन भुक्तानीजस्ता क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । कतिपय व्यवसाय करको दायरामा आए पनि सबै व्यवसाय सहभागी नभइसकेकाले साना व्यवसायीलाई समेत ल्याउने प्रयास हुने समिति दाबी छ ।
पहिलो चरणमा ठूलो कारोबार हुने तर सरकारी राजस्वमा खासै योगदान नदेखिएका क्षेत्रलाई करयोग्य बनाउन अध्ययन अघि बढाइएको समिति अध्यक्ष दहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ढुवानी व्यवसाय पछिल्लो समय निकै फस्टाए पनि राज्यले त्यसबाट कर संकलन गर्न सकिरहेको छैन । सम्पूर्ण व्यवसाय करको दायरा ल्याउने समितिको उद्देश्य भएको उनी बताउँछन् ।
खासगरी, ढुवानीका लागि प्रयोग हुने ट्रक, लहरी, मिनी भ्यानलगायत सबै किसिमका सवारीसाधनले प्राप्त गर्ने आम्दानी कर क्षेत्रभित्र नरहेकाले त्यसलाई पनि करयोग्य बनाउने समितिको लक्ष्य हो ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०३:५८
ढुङ्गोमा मान्छेको अनुहार भएको भगवानको शक्तिको स्वरुप !!! कृपया देख्न साथ लाइक गरि सेयर गर्नुहोस । हजुर को दिन शुभ हुनेछ 🙏🙏
के बुद्ध एयरको जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए ? पाइलट शेर्पासँगको फोटो यसरी भयो भाइरल (भिडियो सहित)
पाइलट शेर्पा भन्छन्– यस्तो कहिल्यै भएको थिएन, सायद म ड’राएको भए जहाज बीचमै खस्थ्यो होला
७७ जनाको ज्यान बचाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पा
क्याप्टेन भन्छन् आफू मरेर भएपनि यात्रु लाई बचाउने थिए….
बुद्ध एयरको विमानका यात्रुको अनुभव : : जहाजभित्रै रूवाबासी चल्यो, हामीले त आश मारिसकेका थियौं
यति जोखिम मोलेर ७७ जनाको ज्यान बचाउने यिनै हुन् पाइलट क्याप्टेन एजी शेर्पा, त्रिभुवन बिमानस्थलमा अवतरण गर्दै गर्दाको भिडियो सहित
बधाई तथा शुभकामना नेपालमा पहिलो पटक महिला गभर्नर ! सम्मान स्वरुप सबैले एक सेयर गरिदिनुहोला
महेश बस्नेतलाई जनक बर्तौलाले दिए भिडन्तका लागी निम्तो !
सुवर्ण अवसर झन्डै मासिक ‘२’ लाख तलव पाउने गरि इजरायलमा नेपालीका लागि रोजगारी खुल्यो
टिकटक, पब्जी र फ्रिफायर तुरुन्तै बन्द गर्न अदालतको आदेश !
२ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको रिप लेखी सेयर गरेमा जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ
अ”लबि”दा बलिउड अभिनेत्री अरुणा इरानी